यस्तो बन्दैछ नेकपा पोलिटब्युरो : उपगुट मिलाउन पूर्वमाओवादीभित्र सकस !
यस्तो बन्दैछ नेकपा पोलिटब्युरो : उपगुट मिलाउन पूर्वमाओवादीभित्र सकस !
काठमाडौँ - जिल्ला एकीकरण टुंगिएलगत्तै सत्तारुढ नेकपाले पोलिटब्युरो तहको एकता अघि बढाएको छ । तीन प्रमुख नेता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सहमतिमा पोलिटब्युरो चयनको गृहकार्य अघि बढाएका हुन् । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ रहने गरी पोलिटब्युरो कमिटी गठन हुने नेकपा विधानमा व्यवस्था छ । चार सय ४१ जना केन्द्रीय समितिबाट एक सय ४७ जनासम्मको पोलिटब्युरो गठन हुनेछ ।
पूर्वएमाले समूहबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाँकी २० सदस्यमा दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेकामध्येबाट चयन गर्ने तयारी छ । यो मापदण्डअनुसार करिब ३० जना पूर्वएमालेका नेता पोलिटब्युरोका लागि दाबेदार देखिएका छन् । त्यसमध्ये केदार न्यौपाने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोमा देवकोटा, घनेन्द्र बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, ठाकुर गैरे, राजेन्द्र राई, देवराज घिमिरे, डा. विजय सुब्बा, वैजनाथ चौधरी, ममता गिरी, राधाकृष्ण मैनाली, विरोध खतिवडा, शेरबहादुर तामाङ, श्रीप्रसाद शाह, ज्ञानबहादुर भुजेललगायत नेता नयाँ अनुहारका रूपमा दाबेदार छन् ।
पूर्वमाओवादी समूहबाट वरियता मिचेरै केही नेता नेकपाको स्थायी समिति सदस्यमा सिफारिस भएकाले वरियतामा अघि रहेका पनि पोलिटब्युरोको दौडधुपमा लागेका छन् । पूर्वमाओवादी समूहका केही सचिवालय सदस्य जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा समेत चुनिएका छन् ।कम संख्यामा धेरै नेता समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा पूर्वएमालेभन्दा माओवादीमा बढी सकस पर्ने देखिन्छ ।